En vente actuellement 22/11/2018
3 andro dia te hihena…araho ny “regime” be proteina
Azo atao tsara ny mihena vetivety raha toa ka tsy dia betsaka loatra ny lanja tiana ho very. 3 andro izao ianao dia hihena, raha hanaraka an’ity “regime” ity.
Azo sitranina tokoa ve ny homamiadan’ny nono ?
Tsiry mpanentana roa no mivoaka amin’ny vehivavy ao anatin’ny tsingerim-bolana dia ny “progesterone” sy ny “oestrogène”.
Maro ireo olo-malaza no mankafy mahandro. Tsy tena fahazaran’izy ireo ny manao izany indraindray, noho izy ireo manana mpiasa manokana efa matihanina momba ny lakozia.
Legioma saosy, amin’ny tavim-boanio
Akora ilaina · Legioma 1kg (araka izay tiana: petit pois, karaoty,ovy, choux fleur, broccolis, voatavo, selery, korzety, baranjely…) · Tongolo be 1 · Menaka 2 sf · Curry 2sf · Tavim-boanio 400ml · Kotomila tahony 2 eo · Sira sy dipoavatra
Shopping « sac et pochette »
1. Sac Hermes – Boutique 51 Ampefiloha derrière Shoprite, en face de Safron Boutique 67ha
Ireo teknika fampiasana “crayon noir” ho an’ny maso
Fitaovana tsy afa-misaraka amin’ny resaka fanaingoana tarehy ny « crayon noir ». Ny maso sy ny manodidina azy no tena hampiasana ity fitaovana kely ity.
Vehivavy saodiana miisa 7 no niara-voaolana sy nampiharana herisetra
Niharan’ny herisetra ireo vehivavy notanana am-ponja tao Arabia Saodita tany amin’ny tapaky ny volana jona tany, fotoana nandrarana ny vehivavy tsy hitondra fiara tany an-toerana.
Lehilahy niady tamin’ny vadiny, nahatifitra olona telo
Olona efatra no maty vokatry ny fifampitifirana tao amin’ny faritry ny hopitaly iray ao Chicago Etazonia ny alatsinainy lasa teo.
Ankizy miisa 85 000 no namoy ny ainy nhatramin’ny taona 2015, tany Yemen
Ankizy manodidina ny 85 000 no namoy ny ainy tany Yemen hatramin’ny taona 2015 no nankaty, raha ny tatitra navoakan’ny fikambanana « Save the children ».
Vehivavy 16 taona aho. Misy lehilahy miaraka amiko, tena tiako.
Nilaza tamiko anefa izy fa mila vehivavy virjiny, saingy izaho tsy virjiny intsony.
"Le plus beau rouge à lèvres qu'une femme puisse porter, c'est un sourire" (Jo Coeijmans)
Maro ny firenin-drazantsika no mandrisika antsika vehivavy mba hikajy ny hatsaran-tarehy. Fandre matetika, ohatra ny hoe : ny vehivavy sady ravaky ny tokantrano no endriky ny lalana. Eo ihany koa ilay hoe : ny vady jerijery.
Elodie Arnould : Mpanao hatsikana Malagasy, malaza any Frantsa
Betsaka no mety tsy mbola mahafantatra tsara an’i Elodie Arnould eto Madagasikara. Any anaty tambazotra sosialy any kosa no tena ahitana azy matetika noho ireo hatsikana zarainy amin’ny alalan’ny horonan-tsary fohy.